New Day Jobs | How to Plan Wisely | Career Blogs
How to Plan Wisely
Career Advice 13 Mar 2020
Thant Thandar Soe
အရာရာတိုင်းက Plan အပေါ်မှာ မှီခိုနေတာပါ။ Plan မရှိပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ချိန်ကျရင် ပလန်လက် ပက်လက်လန်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ ပက်လက်မလန်ရအောင် ဘာအတွက်ပဲ Plan ချချ ဒီအချက် ၅ ချက် ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ Plan တစ်ခုကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
1. ဘာလုပ်ချင်တာလဲကို သိအောင်လုပ်ပါ။﻿ကိုယ်ကိုကိုယ် အတွက် Plan ချသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်အတွက် Plan ချသည်ဖြစ်စေ ပထမဆုံးအနေ နဲ့ သင်ကဘယ်နေရာ ဘယ်အဆင့်မှာရောက်နေပြီး သင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာ ကိုသွားချင်တယ်၊ ဘယ်အဆင့်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
2. ဘယ်အရာတွေက အရေးကြီးလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီး အရေးကြီးတာတွေကို အရင်ဆုံးလုပ်ကိုင်ရန် အတွက် အစီအစဉ်ချပါ။
သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ရင်မြန်မြန်ပိုရောက်နိုင်သလဲ စသည်ဖြင့်စီစစ်ရပါမယ်။
3.ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
သင်က လုပ်ငန်းအတွက် ဆိုရင်Deparment က ဒီ Goal တွေကို ရရှိဖို့အတွက် ပိုအရေးပါလဲ။ လူတစ်ယောက်ချင်းအတွက်ဆိုရင်လည်း Goal ကို ရဖို့အတွက် ဘာကအဓိက လိုအပ်သလဲဆိုတာ စီစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4. ပြီးရင်တော့ လိုအပ်တာတွကို ဘယ်လို ရှာဖွေမလဲဆိုတာကို စီစစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ သင့် ရဲ့ ရည်မှန်းချက် က Executive သို့ Manager ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်၊ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို လည်းအပြင်သင်တန်းကျောင်းတွေကနေ သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
﻿ဘယ်အရာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အရာတွေကိုလည်း အမြဲမပြတ် ပြန်လည်စီစစ်နေဖို့ လဲလိုအပ်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက် ၅ ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရင် အရမ်းမပြည့်စုံရင်တောင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ Plan တစ်ခုကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
New Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် Platform ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များကို ရှာဖွေချင်ရင်တော့ New Day Jobs မှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
All LandYourDreamJob Workplace Success Personal Upgrade Workplace Skill Time management Career Advice Productive
Tips For Sending Your CV
Fundamental Steps to SecureaJob
How to writeaqualified CV
Subscribe to our newsletter and stay up to date with latest job trends and career tips!
NO, I’ll pass for now